isomers कसरी उत्पादन गर्न विचार अघि संतृप्त hydrocarbons को जैविक पदार्थ को यो वर्ग को सुविधाहरू प्रकट गर्न।
धेरै कक्षाहरू CxHy जैविक रसायन मा खडा। सबैलाई एक सामान्य सूत्र, छ homologous श्रृंखला, गुणस्तरीय प्रतिक्रिया, अनुप्रयोग। लागि संतृप्त alkane हाइड्रोकार्बन वर्ग विशिष्ट एकल (सिग्मा) बन्धन। जैविक पदार्थ CnH2n +2को यो वर्ग को सामान्य सूत्र। विस्थापन, बल्न, ओक्सीकरण: यो आधारभूत रासायनिक गुण बताउँछन्। paraffins लागि एकल यी hydrocarbons को अणु मा संचार देखि, सामेल विशिष्ट छैनन्।
isomerism को घटना जैविक पदार्थ को विविधता बताउँछन्। isomerism अन्तर्गत सामान्यतः त्यहाँ धेरै छन् जो घटना बुझ्ने गरिन्छ जैविक यौगिकों सदस्यहरूको नै नम्बर (को अणु मा अणुहरु को नम्बर), तर अणु तिनीहरूलाई एक फरक व्यवस्था भएको। परिणामस्वरूप सामाग्री isomers भनिन्छ। तिनीहरूले hydrocarbons धेरै कक्षाहरू, र यसैले विभिन्न रासायनिक गुण प्रतिनिधिको हुन सक्छ। विविध मिश्रित अणु alkanes अणुहरु एक संरचनात्मक isomerism गर्न वृद्धि दिन्छ। alkanes को isomers कसरी हुन? त्यहाँ जो जैविक पदार्थ को यो वर्ग को संरचनात्मक isomers प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ अनुसार, एक विशिष्ट अल्गोरिदम छ। त्यहाँ मात्र चार कार्बन अणुहरु, अर्थात्, butane C4H10 एक अणु संग यस्तो सम्भावना छ।
को isomers को सूत्रहरू कसरी लेख्न बुझ्न क्रममा, यो यसको प्रकारका समझ छ महत्त्वपूर्ण छ। बराबर संख्या, फरक क्रममा ठाउँ मा स्थित हो जसमा अणु भित्र नै अणुहरु को उपस्थिति मा, स्थानिक isomerism बुझाउँछ। अन्यथा, यो stereoisomerism भनिन्छ। यो स्थितिमा, केवल एक को प्रयोग संरचनात्मक सूत्र पर्याप्त छैन, विशेष प्रक्षेपण वा स्थानिक सूत्रहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ। संतृप्त hydrocarbons H3C-CH3 (एटैन) बाट सुरू हुने, विभिन्न स्थानिक विन्यास छ। यो द्वारा सी-सी बन्धन को अणु भित्र परिक्रमा कारण हो। यो एक सरल σ-बन्धन सिर्जना एक conformational (रोटरी) isomers सम्भव छ छ।
संरचनात्मक isomers paraffins
गरेको alkane isomers कसरी बनाउने कुरा गरौं। कक्षा, एक संरचनात्मक isomer छ अर्थात्, फरक कार्बन अणु श्रृंखला खेल्छ। अन्यथा, कार्बन कंकाल को कार्बन अणुहरु को श्रृंखला मा स्थिति परिवर्तन को संभावना isomerism भनिन्छ।
heptane को isomers
यसैले, संरचना C7H16 भएको पदार्थ को isomers छोडेर? स्टार्टर्स लागि, तपाईं, एक लामो स्ट्रिङ सबै कार्बन अणुहरु को व्यवस्था गर्न सकिन्छ प्रत्येक कति अणुहरु सी को एक निश्चित संख्या थप्न? दुई - कार्बन को valence, चार बराबर छ कि तीन हाइड्रोजन अणुहरु चरम अणुहरु र भित्री मा खातामा लिएर। heptane - परिणाम अणु एक रैखिक संरचना, N भनिने हाइड्रोकार्बन छ। पत्र "N" हाइड्रोकार्बन एक सीधा कार्बन कंकाल हो।
अब, कार्बन अणुहरु को स्थान परिवर्तन यो मामला मा C7H16 मा एक सीधा कार्बन श्रृंखला "छोटो पार्दै"। सिर्जना isomers विस्तृत वा छोटो संरचनात्मक रूप मा हुन सक्छ। अब दोस्रो embodiment विचार गर्नुहोस्। पहिलो सी अणु विभिन्न स्थान मा कट्टरपंथी एक मिथाइल व्यवस्था।
सक्रिय isomer heptane, 2-methylhexane: निम्न रासायनिक नाम छ। अब मूल कार्बन अणु अर्को गर्न "हामी सार्न"। परिणामस्वरूप संतृप्त हाइड्रोकार्बन 3-methylhexane भनिन्छ।
हामी मूल नम्बर सार्न सही पक्षमा सुरु हुनेछ जारी यदि छ, (शीर्ष नजिक हाइड्रोकार्बन कट्टरपंथी छ), हामी पहिले नै जो यो isomer प्राप्त। तसर्थ, सुरु सामाग्री को isomers को सूत्र कसरी बनाउने बारे भन्ठानेर कंकाल पनि "छोटो" बनाउन प्रयास गर्नेछ।
मिथाइल - कार्बन को बाँकी दुई दुई मुक्त कण को रूप मा उपस्थित हुन सक्छन्।
पहिलो मुख्य श्रृंखला मा समावेश विभिन्न carbons तिनीहरूलाई व्यवस्था। हामी परिणामस्वरूप isomer -2,3 dimethylpentane कल।
अब एउटै स्थानमा एक कट्टरपंथी छोड्न र मुख्य श्रृंखला को अर्को दोस्रो कार्बन अणु गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ। यो सामाग्री 2,4 dimethylpentane भनिन्छ।
अब व्यवस्था हाइड्रोकार्बन कण एक कार्बन अणु छ। सुरुमा, दोस्रो, 2,2 dimethylpentane प्राप्त। त्यसपछि, तेस्रो dimethylpentane 3.3 प्राप्त।
अब हामी चार कार्बन अणुहरु, मिथाइल कण रूपमा अन्य तीन प्रयोग को मुख्य श्रृंखला मा छोड्नुहोस्। - तेस्रो कार्बन दोस्रो सी अणु मा दुई, एक: निम्नानुसार हामी तिनीहरूलाई व्यवस्था। हामी कल isomer प्राप्त: 2,2,3trimethylbutane।
उदाहरण heptane हामी संतृप्त hydrocarbons को isomers कसरी बनाउने छलफल। चित्रमा संरचनात्मक isomers उदाहरणहरू यसको butena6 क्लोरीन डेरिवेटिव लागि प्रतिनिधित्व छन्।
जैविक पदार्थ को यो वर्ग सामान्य सूत्र CnH2n छ। यो वर्ग मा संतृप्त सी-सी बन्धन साथै, त्यहाँ पनि डबल बन्धन छ। यो श्रृंखला को आधारभूत गुणहरू निर्धारण गर्छ। का कसरी alkenes को isomers छोड्न कुरा गरौं। संतृप्त hydrocarbons देखि आफ्नो मतभेद प्रकट गरौं। जैविक hydrocarbons यस वर्ग प्रतिनिधिको लागि मुख्य श्रृंखला (संरचनात्मक सूत्र) को isomerism बाहेक पनि isomers, ज्यामितीय (सीआईएस र ट्रान्स प्रकारका) को तीन प्रजाति, धेरै बन्धन स्थिति र Interclass isomer (cycloalkanes) द्वारा विशेषता छ।
C6H12 को isomers
alkenes, cycloalkanes: कसरी सूत्रमा पदार्थ जैविक यौगिकों दुई वर्गहरू सीधा हौं गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई विचार, isomers c6h12 रचना गर्न पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुहोस्।
सुरु गर्न, यदि अणु मा एक डबल बन्धन छ, alkenes को isomers हुन कसरी सोच्न। सीधा कार्बन श्रृंखला राख्नु, पहिलो कार्बन अणु पछि धेरै बन्धन राखे। हामी s6n12 isomers बनाउन मात्र होइन, तर पनि पदार्थ नाम प्रयास गर्नुहोस्। यो सामाग्री - hexene - 1 नम्बर अणु मा स्थिति एक डबल बन्धन संकेत गर्छ। कार्बन श्रृंखला साथ यसको आन्दोलन मा, hexene -2 र hexene प्राप्त - 3
अब हामीलाई कसरी मुख्य श्रृंखला मा अणुहरु को संख्या परिवर्तन, यो सूत्र को isomers बनाउन लाग्छ।
सुरु कार्बन कंकाल एक कार्बन अणु छोटा, यो मूल एक मिथाइल रूपमा मानिन्छ। एटम पहिलो बिदा पछि डबल बन्धन एस को परिणामस्वरूप isomer क्रमबद्घ nomenclature निम्न नाम हुनेछ:2methylpentene - 1 अब डबल बन्धन को स्थिति अपरिवर्तित छोडेर, मुख्य श्रृंखला मा hydrocarbyl समूह सार्न। यो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भनिन्छ3methylpentene-1 branched संरचना छ।
यो मुख्य श्रृंखला र एक डबल बन्धन isomer को स्थिति परिवर्तन बिना सम्भव छ:4methylpentene-1।
C6H12 संरचना लागि नै परिवर्तन मुख्य श्रृंखला बिना दोस्रो स्थिति पहिलो देखि डबल बन्धन सार्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। कट्टरपंथी यसरी दोस्रो परमाणु एस यो isomer नाम2methylpentene-2 छ देखि, कार्बन कंकाल साथ सारिने। यसबाहेक, यो एक कट्टरपंथी CH3 तेस्रो कार्बन अणु यसरी 3-methylpentene2प्राप्त राख्न सम्भव छ
4 methylpentene-2 - चौथो कार्बन अणु श्रृंखला मा अवशेषहरु मा राखिएको गर्दा कार्बन कंकाल घुमावदार अर्को नयाँ पदार्थ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन गठन गरिएको छ।
मुख्य श्रृंखला मा नम्बर सी को एक थप कमी संग, एक isomer प्राप्त गर्न सक्छ।
डबल बन्धन पहिलो कार्बन अणु पछि छोड्न हुनेछ, र दुई कट्टरपंथी dimetiluten 3,3-1 प्राप्त, मुख्य श्रृंखला को तेस्रो सी अणु गर्न छुटाउनुहोस्।
अब हामी डबल बन्धन को स्थिति परिवर्तन प्राप्त 2,3-dimethylbutyl 1 बिना आसन्न कार्बन अणुहरु मा कण राखे। , मुख्य श्रृंखला को आकार दोस्रो स्थिति डबल बन्धन कदम नफेरी प्रयास गर्नुहोस्। यो कण यसरी हामी 2,3 dimethylbut-2 भइरहेको मात्र2वा3सी अणुहरु आपूर्ति गर्न सक्छन्।
दिइएको alkene अन्य संरचनात्मक isomers छैन, जैविक पदार्थ ए एम Butlerova को संरचना को अवरोध नेतृत्व गर्नेछ सिद्धान्त संग आउन कुनै पनि प्रयास।
स्थानिक isomers C6H12
अब तत्संबंधी स्थानिक isomerism को दृष्टिकोण देखि isomers र homologs कसरी उत्पादन गर्न पत्ता। यो सीआईएस र ट्रान्स alkenes2र3को डबल बन्धन को स्थिति को लागि सम्भव मात्र हो भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
एक विमान मा हाइड्रोकार्बन कण सीआईएस गठन गर्दा - मापन -2-hexene, र विभिन्न विमानहरु, ट्रान्स-hexene फारममा कण व्यवस्था मा - 2।
Interclass C6H12 isomers
isomers कसरी बनाउने र homologues Interclass isomerism रूपमा यो embodiment बारेमा भूल सक्दैन बारेमा तर्क। लागि असंतृप्त hydrocarbons , Ethylene संख्या सामान्य सूत्र भइरहेको CnH2n यस्तो isomers cycloalkanes छन्। hydrocarbons यस वर्ग को सुविधा कार्बन अणुहरु बीच संतृप्त एकल बन्धन मा एक चक्रीय (बन्द-पाश) संरचना उपस्थिति छ। तपाईं cyclohexane, methylcyclopentane, dimethylcyclobutane, trimetiltsiklopropana को एक सूत्र सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
जैविक रसायन enigmatic, बहुमुखी छ। जैविक पदार्थ को मात्रा पटक सयौं अकार्बनिक यौगिकों संख्या बढी छ। यो वास्तवमा सजिलै isomers जस्ता एक अद्वितीय घटना अस्तित्व द्वारा बताए छ। एक homologous श्रृंखला संरचना र माला मा कार्बन अणुहरु को स्थिति परिवर्तन पदार्थ को गुणहरू, त्यस्तै प्रबन्ध छ भने, isomers नाम नयाँ यौगिकों छन्। जैविक यौगिकों को रासायनिक संरचना को सिद्धान्त सबै hydrocarbons वर्गीकृत गरिएको छ मात्र पछि प्रत्येक वर्ग को विशेष बुझ्न। यो सिद्धान्त को प्रावधान को एक, सीधा isomerism को घटना सम्बन्धित। ठूलो रूसी रसायनविद्, कार्बन अणुहरु को स्थान पदार्थ, यसको reaktsionanya गतिविधि, व्यावहारिक आवेदन रासायनिक गुण निर्भर भनेर प्रमाणित गर्न, व्याख्या गर्न बुझ्न, सक्षम थियो। हामी तुलना यदि isomers संख्या हाशिये असंतृप्त alkanes र alkenes, पक्कै पनि alkenes प्रमुख गठन। कारण त्यहाँ अणु मा एक डबल बन्धन छ भन्ने छ। कि यो जैविक कुरा यस वर्ग विभिन्न प्रकारका र संरचना को छैन केवल alkenes गठन गर्ने, तर पनि cycloalkanes संग meklassovoy isomers बारेमा कुरा गर्न अनुमति दिन्छ।
सामन परिवार। सामन को प्रकार
एक डेजी बारेमा परी कथा। कसरी लेख्न?
प्ले "द चेरी बागवानी" (निबंध) मा Lopakhin छवि
प्रकार र जानकारी धारणा को विधिहरू
अस्ट्रिया: शहर र रिसोर्ट्स
आधारभूत को वर्गीकरण गर्ने व्यवहार मा अर्थ
Nina Veselovskaya: जीवनी र चलचित्र
खेल रोकथाम, वा सङ्कुचन मोजा के हुन्
वसन्त जैकेट: वर्तमान मोडेल
व्यावहारिक सल्लाह: "वचन" को सामग्री कसरी बनाउने
के: "iPhone" नेटवर्क पकड छैन?
प्रतिभाशाली अभिनेता। "तपाईं दिन माथि" - फिलिम को एक रोमाञ्चक रील
यो फैंसी अदुवा मूल: लाभ र हानि